Email nwụrụ anwụ? Ekwula na Jenni na Janneane | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 29, 2010 Saturday, October 29, 2011 Douglas Karr
Mgbe ọ bụla ọzọ, ị na-anụ mumblings… ozi anwuola. Dịka ọ na-esite na ndị folks na-eche aka na igbe mbata ma na-emezighị emezi nke ọma email ha. Email dị anya nwụrụ anwụ… na akaebe bụ azụmaahịa dịka Indy onye nkiri.
Indy Spectator bụ naanị ụlọ ọrụ email. Ha na-eji ndị edemede nwere ọgụgụ isi akọ akụkọ niche banyere ịga na Indianapolis. Jenni Edwards hụrụ echiche ahụ na ahịa ndị ọzọ yana, ebe ọ bụ onye na - ahụ maka netwọkụ dị egwu, ọ sonyeere Janneane Blevins iji mepụta mmalite a na - aga nke ọma. Kemgbe Eprel, ha ahụla ndepụta ndebanye aha ha okpukpu asaa!
Ha na nso nso a rebrand, na enyemaka nke Kristian Andersen + Ndị mmekọ (otu nke kasị mma ika ahụmahụ na ụlọ ọrụ ndị dị n'ụwa… na-arụrụ ọrụ ka Janneane). Akwụkwọ akụkọ ahụ adịworị mma n'ihi ọdịnaya… mana ugbu a, imewe ahụ ejidela ọdịnaya ahụ:
Gịnị bụ isi m? Enweghị ezigbo usoro iji buru ozi dịka nke a karịa email. Ọ bụ naanị ya, ọ bụ nke ya, na ọ dị mma. Otu blọọgụ bụ nnukwu usoro, mana ịgbasa ozi nye onye ọ bụla na-etinye ọdịnaya ahụ n'ụzọ dị iche, agaghịkwa eri ya ma ọ bụ meghachi omume n'otu ụzọ ahụ. Emebe a ika nke ahụ bụ otu ihe na ọdịnaya na-eme ka ọ niile ọzọ na klas… lelee a email!
Ọkt 29, 2010 na 11:39 AM
Daalụ Doug maka ịhụnanya! Dị nnọọ ka a dee - anyị na ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị relaunched na ọhụrụ mbọn ma… kwesịrị n'oge na-adịghị na atụmatụ ụfọdụ oké foto si Joetography agbakwunyere n'ime KA + A imewe - ebube!
Dị ka ihe edeturu - anyị na-ebido mmalite Spectator iji kpuchie akụkọ mmalite banyere Indy…
Daalụ ọzọ - email adịghị anya anwụ!